Fifidianana: namaky lay ny propagandiny tany Itasy sy Itaosy Rajoelina | NewsMada
Fifidianana: namaky lay ny propagandiny tany Itasy sy Itaosy Rajoelina
Par Taratra sur 05/12/2018
Nosantarin’ny kandidà Rajoelina tany Ampefy sy Ampary, hatrany Soavinandriana sy Analavory, ny fampielezan-keviny amin’ny fifidianana fihodinana faharoa, omaly. Nialohavan’ny fotoam-pivavahana nitondrana am-bavaka ny fampielezan-kevitra tao amin’ny lasapela Masina Maria ao Ampefy, ivon’i Madagasikara, izany ary nitsofana rano koa ity kandidà laharana faha-13 ity. “Hitety an’i Madagasikara aho ka rariny raha apetraka amin’Andriamanitra izany. Rariny koa raha eto amin’ny ivon’i Madagasikara, amin’ny maha katolika ahy, ny nisafidianana ity toerana ity. Efa nambarako fa hanolo-tena ho an’ny firenena. Hiasa ho an’ny vahoaka sy hanavotra an’i Madagasikara. Nanintona ahy tao amin’ny fandaharan-kira ilay hoe « Nifidy ahy ny Tompo ». Vonona ny handeha aho ary hitety faritra maro. Baikon’ny fitiavana hanatanteraka izany iraka ampanaovin’i Jesoa Kristy ahy izany”, hoy izy.
Tsy maintsy voalohany rehefa mifaninana
Nihaona amin’ny vahoakan’Ampefy avy hatrany ny mpanorina ny IEM avy eo ary nilaza fa tsy maintsy voalohany rehefa mifaninana fa tsy faharoa na fahatelo. Efa voalohany rahateo tamin’ny fihodinana voalohany teo. “Ampio aho hahafahako manampy anareo. Tonga eo amin’ny kihon-dalana i Madagasikara. Isika tsy naman’ny mihemotra fa tsy maintsy mandresy. Isika hitondra fahazavana”, hoy izy. Nampanantena ny hanorina ozinina hamokatra zezika ny tenany. Ho an’ny ao Ampary kosa, nohitsiny fa tsy azo ekena izao fahantrana lalina izao. Naneho fahavononana hanampy ny vehivavy, ny tanora, ny ankizy ary indrindra, ny tantsaha ny tenany.
Homena fitaovana ny tanora hamboly sy hiompy
Nihazo an’Analavory avy eo ny kandidà Rajoelina. Namaly ny hetahetan’ny mponina ny tenany ka nilaza fa hatao manara-penitra ny tsena. Hofanina ary homena angadin’omby sy akoho ny tanora ary tolorana tany 10 ha avy ireo hisafidy ny hamboly sy hiompy. Hamboarina ny lakandrano hanondrahana ny tany fambolena.
Ho an’ny ao Soavinandriana kosa, hametraka ho laharam-pahamehana ny fandriampahalemana ny tenany ka hatsangana any an-toerana ny vondron-kery manokana hiady amin’ny dahalo. Hasiana “puce” ny omby. Hanamboarana kianja manara-penitra any an-toerana. Nitohy teny Itaosy sy Tongarivo izany ny hariva ka vory marobe ny vahoaka liana tamin’ny lahatenin’ny mpanorina ny IEM sy ny velirano nataony.